Honor သည်6Honor XNUMX Plus နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ကောင်းသောခံစားချက်များကိုကျန်ရစ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခု high-end terminal နှင့်ကိုက်ညီ၎င်း၏အရည်အသွေးကိုချောနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်။ အခု Huawei လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီကိုလန်ဒန်တွင်တင်ပြသည် ၎င်း၏အသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် ဂုဏ်ပြု7။
Honor သည်ဥရောပဈေးကွက်တွင်သူ့ဟာသူတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါပြီးသားပထမ ဦး ဆုံးအာရုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြောပြပါ ဂုဏ်ပြု7၏တရားဝင်တင်ဆက်မှု သူတို့ကပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်ပါပြီနိုင်ဘူး။
1 ဂုဏ်ပြု 7, အရည်အသွေးကိုချောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဇိုင်း
2 ချောနှင့်အညီတစ် ဦး ကမျက်နှာပြင်
3 high-end ၏အမြင့်မှာဟာ့ဒ်ဝဲ
5 Fingerprint reader - Honor7သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်
ဂုဏ်ပြု 7, အရည်အသွေးကိုချောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဇိုင်း
ပထမတစ်ချက်မှာ Honor7နှင့် Huawei Ascend Mate7တို့၏တူညီသောဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပြီးမြောက်မှုများသည်။ ထိုအခါ Honor7တစ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ် အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သတ္တုကိုယ်ထည် ထိတွေ့မှုအတွက်သာယာသောခံစားချက်ကမ်းလှမ်းသောပွတ်လူမီနီယံဘောင်နှင့်အတူ။
တည်ဆောက်မှုသည်ခိုင်မာပြီး၎င်းသည် ၈.၅ မီလီမီတာအထိရောက်ရှိသည့်ဖုန်း၏အထူတွင်ပြသသည်။ Honor7သည် Huawei P2 ထက် ၂ မီလီမီတာပိုမိုထူသည်.
၎င်း၏အနည်းငယ် rounded အနား Honor7ကိုပိုမိုခွင့်ပြုသည် ကိုင်တွယ်ရန်အဆင်ပြေ။ အရွယ်အစားမှာ ၁၄၃.၂ မီလီမီတာ၊ အရှည် ၇၁.၉ မီလီမီတာနှင့် ၈.၅ မီလီမီတာရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ ၁၅၇ ဂရမ်အလေးချိန်ကအရွယ်အစားရှိပေမယ့်ယူဖို့မလွယ်ဘူး။ Honor 143.2 ကိုသူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုကထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ
El ဂုဏ်ပြု7လက်ဗွေဖတ်စက် ၎င်းသည် terminal ၏အလူမီနီယမ်နောက်ဘက်တွင်၊ အလယ်ဗဟိုနှင့်ကင်မရာအောက်တွင်တည်ရှိသည်။ Honor7၏နောက်ကျောအပေါ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထိတွေ့မှုမှာစိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ပေ။ ဤနေရာသည်ဖုန်း၏အင်တင်နာများတည်ရှိပြီးပလတ်စတစ်၊ Bluetooth နှင့် WLAN ကွန်ယက်များသည်ဖုန်း၏ဂျီအက်စ်အမ်ဆက်သွယ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။
P8 Lite နှင့်ဆင်တူသည် Honor7၏အောက်သည် microUSB port၊ mono စပီကာနှင့် microphone တို့ကိုဖုန်းခေါ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဟုတ်တယ်၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်တယ်၊ mono စပီကာ။ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သောအမှား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုပြုနိုင်သည့်အခါ၎င်းမည်သို့ပြုမူနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်။
လက်ျာဘက်၌ Huawei ဖုန်းများတွင်တွေ့ရသည့်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ခလုတ်ကိုတွေ့ရသည်။ ပေါ်လွင်ချက်များaVolume Control ခလုတ်များနှင့်ခွဲခြားရန်ပါဝါခလုတ်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ကြမ်းတမ်းမှုရှိသည်။
အခြားဖုန်းများ၏အားသာချက်များကို Honor မှအမြတ်ထုတ်လိုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ကိုရှာပါ ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်, OnePlus2ပုံစံသည်အလွန်သင့်လျော်သည်၊ သင့်အား Honor7၏အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤခလုတ်နှင့်အတူ Honor သည် nano SIM ကဒ်နှစ်ခုသို့မဟုတ် nano SIM နှင့် microSD အထိကိုင်နိုင်သော slot တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ ငါတကယ် P8 / P8 Lite ကိုကြိုက်တယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူအမြတ်ထုတ်သောစိတ်ကူးတစ်ခု။ Samsung ကဲ့သို့သောအခြားသူများလည်းသင်ယူနိုင်ပါပြီ
ချောနှင့်အညီတစ် ဦး ကမျက်နှာပြင်
တစ်ထောင့်ဖြတ်နှင့်အတူ 5.2 လက်မ, Honor7မျက်နှာပြင်သည် IPS panel ၏ကျေးဇူးကြောင့် Full HD resolution (1920 x 1080 pixel) သို့ရောက်ရှိသည်။ မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုပေးသည်။ သူတို့ရဲ့စဉ်းစားယုတ္တိတစ်ခုခု 424dpi
အရောင်များကိုချွန်ထက်ကြည့်ရှုပါ အဆိုပါကြည့်ရှုထောင့်မှန်ကန်သောထက်ပိုပါတယ်။ နေ ၀ င်သောနေ့၌မည်သို့ပြုမူသည်ကိုသိရန် Honor7မျက်နှာပြင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်စမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အဲဒါကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ Honor7မျက်နှာပြင်သည် ၇၃% နီးပါးနေရာယူထားသည်။ ၎င်း၏အနည်းဆုံးဘေးထွက် frames များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူကပေးထားသောအရောင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်ကောင်းသည်ဟုငါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းအာရှ၏ထုတ်လုပ်သူများ၏ဖုန်းများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်နွေးထွေးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Honor7၏မျက်နှာပြင်သတိပြုပါ LG's KnockOn စတိုင်ကဲ့သို့နှစ်ဆထိပုတ်ခြင်းဖြင့် activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းတဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခု။
Huawei သည် Honor7ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပြန်လှည့်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာကိုရှာနိုင်သည် နှစ်လုံးကိုလည်း Kirin 935၁.၅ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Cortex-A53 Core လေးခုနှင့်အခြား Cortex-A1.5 လေးခုတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောရှစ် core SOC တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂.၂ GHz အမြန်နှုန်းသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏ Mali T-628MP4 GPU သည်မည်သည့်ဂိမ်းနှင့်မည်သည့် application ကိုမဆိုကောင်းမွန်စွာရွေ့လျားခွင့်ပြုသည်. ဟုတ်တယ်၊ ဒီဂရပ်ဖစ်အပြောင်းအလဲယူနစ်ဟာ Samsung Galaxy S5 အသုံးပြုတဲ့စက်ထက်သာနေတယ် ဒါကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ LG G4 ဒါမှမဟုတ် Galaxy S6 ကပိုမြန်လာမယ်ဆိုတာသတိပြုမိလိမ့်မယ်။
Huawei လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အထင်ကရသစ်၏ hardware ၏အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့ရန် ၃,၁၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုလောင်းသည်။ Honor ဖုန်းများအားလုံးသည်ပျမ်းမျှကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရာကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုထည့်တွက်စဉ်းစားမိသည် el7ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဂုဏ်ပြုပါ အရမ်းကောင်းတယ်ကျနော်တို့ပို။ ပြည့်စုံစေ့စပ်ဆန်းစစ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ပေမယ့်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ Honor7သည်မြန်သောအားသွင်းစနစ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
ရှိပါလိမ့်မည် Honor7အတွက်ဆက်တင်နှစ်ခု3GB RAM နှင့် 16 GB သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှုနှင့်3GB RAM နှင့် 64GB internal memory နှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်နှင့်အတူဗားရှင်း။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးမြန်ဆန်စွာပြေးနိုင်ကြသည်။ ဤပြproblemနာအတွက်အကြွေးသည်၎င်း၏ထုံးစံဖြစ်သော EMUI အလွှာဖြစ်သော်လည်း။
အန်းဒရွိုက် 5.0 Lollipop ထုံးစံ interface ကို EMUI7အောက်မှာပေမယ့်, Honor 3.1 လှိမ့်တာဝန်ရှိသည်။ ဤအလွှာတွင်အက်ပလီကေးရှင်းအံဆွဲမရှိပါ၊ သို့သော်ကွဲပြားသောအိမ်မျက်နှာပြင်များသည်တပ်ဆင်ထားသည့် application များအားလုံးကိုစုဆောင်းပြီး၎င်းတို့ကိုဖိုင်တွဲများဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။
ဒီရှုထောင့်မှာတော့အဘယ်သူမျှမကန့်ကွက်, သင်လျင်မြန်စွာဒီစနစ်ကရန်အသုံးပြုရ။ ငါပြောပြီးပြီဆိုရင် Honor7ဟာငါတို့လုပ်ရပ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်၊ အနည်းငယ်နှောင့်နှေးမှု, ဥပမာ multitasking option ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ
multitasking option တွင်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များလည်းရှိပါသည်။ applications များလေးခုမှလေးခုကိုအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းကမည်သည့် application များကိုကျွန်ုပ်တို့လျင်မြန်စွာဖွင့်ချင်သည်ကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်မသက်မသာဖြစ်စေသည်။ ခဏကြာကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာ multitasking mode ကိုသုံးရန်လျှောက်လွှာကိုတိုက်ရိုက်ရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းငါတွေ့ခဲ့ရပြီ။
Fingerprint reader - Honor7သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်
ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာကိုပြုပြင်ရန် tutorial ကိုသာလိုက်နာရသည် Honor7fingerprint sensor ကိုစတင်အသုံးပြုရန်။
ကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ Honor7လက်ဗွေဖတ်စက်သည်ဖန်သားပြင်ကိုသော့ဖွင့်ရန်အလုပ်လုပ်ရုံသာမက၊ အရမ်း ကျနော်တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုယူနိုင်ပါတယ်, စာဖတ်သူအပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသောအမူအရာများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အချက်ပေးမှုကိုပိတ်ပါသို့မဟုတ်အသိပေးချက်ဘောင်ကိုကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာကိုသက်ဝင်စေရန်လက်ဗွေဖတ်စက်ပေါ်တွင်လက်ချောင်းကိုသာဖိထားရမည်။ ငါအလွန်အသုံးဝင်သောတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒီ biometric sensor ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်သော option တစ်ခု။
Honor7၏အဓိကကင်မရာကိုတစ်လုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် Sony IMX230 မှန်ဘီလူး၊ 20 megapixel အာရုံခံကိရိယာ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကမ်းလှမ်း။ သတိပြုရမည်မှာ Honor7ကင်မရာသည် ၀ င်လာသည့်အလင်းကိုပုံရိပ်နှစ်ခုအဖြစ် ခွဲ၍ သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ မြန်ဆန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးသောစနစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
များစွာသောအမျိုးမျိုးရှိပါသည် ရွေးချယ်စရာများ၊ မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း၊ HDR mode ကိုဖွင့်ခြင်း၊ Honor7၏တင်ဆက်မှုသည်ထုတ်လုပ်သူအသစ်၏အထင်ကရသစ်၏ကင်မရာကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ရန်အသင့်တော်ဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်များမှာအတော်လေးကောင်းမွန်သည်။
ငါတို့သည်သူ့ကိုမေ့လျော့လို့မရပါဘူး ရှေ့ကင်မရာ 8 megapixelကိုယ်တိုင်ပုံတူများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးရှိသောဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်လုံလောက်သည်။
ငါတို့သိခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Honor716 GB သည်စက်တင်ဘာလတစ်လလုံးတွင်ဥရောပစျေးကွက်ကိုအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ကျရောက်စေလိမ့်မည်။ 349 ယူရို။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖုန်းအသစ်ကိုပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆန်းစစ်လေ့လာမှုပြုနိုင်တဲ့အထိစောင့်ရ ဦး မယ်။ ဒါပေမယ့်အခု Honor7ငါ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ကပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။
အာရှထုတ်လုပ်သူကကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။ ဒီနှုန်းကိုဆက်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ဥရောပမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့က, Honor7ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » ဂုဏ်ပြု 7, လန်ဒန်မှာတင်ဆက်ပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးစှဲ
သတ္တုဒီဇိုင်းကြောင့်ကြည့်ကောင်းသည်။ ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းမွန်ပုံရသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်အနည်းငယ်အကွေးအကျိတ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် microsd ရွေးချယ်မှုကိုနှစ်သက်သည်၊ လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဘက်ထရီရှိသည်။ QHD အပေါ်ကျွန်ုပ်မလောင်းပါ၊ စပီကာမရှိပါ နောက်ကွယ်မှနှင့်စျေးနှုန်းဆက်ဆက်တတ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ခလုတ်များသည်ဘောင်တွင်မဟုတ်ပါ၊ (အဖုံးတစ်ခုဖြင့်တည့်နိုင်သော်လည်း) ကင်မရာကထွက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။